Superstars WWE 5 izay TSY MAINTSY mihodina amin'ny 2017 - Wwe
Superstars WWE 5 izay TSY MAINTSY mihodina amin'ny 2017
Tamin'ity taona 2016 ity dia nahita vavam-pahefana mahavariana maromaro nanafintohina avy tamin'ny superstars WWE maromaro izahay.
AJ Styles dia nampijaly an'i John Cena niaraka tamin'i Gallows sy Anderson tamin'ny volana Mey, nanomboka ny fifanolanan'izy ireo nandritra ny fahavaratra, i Randy Orton dia nifanaraka tamin'ny fianakavian'i Wyatt, ary nokapohiny niaraka tamin'ny RKO hanatevin-daharana ny fianakaviana i Kane mpiara-miasa aminy.
Nanafika ny Alfa amerikana ny Usos, namihina ny lafiny maizina taorian'ny faharesen'ny Gable sy Jordania, teo koa i Neville, izay nandripaka an'i Rich Swann sy TJ Perkins roa herinandro lasa izay tao amin'ny Roadblock: End of the Line, nanao fanambarana goavana tao amin'ny Fizarana Cruiserweight.
Mampientam-po ireo fihodinan'ny voditongotra rehetra ireo, ary ny fifandimbiasan'ny toetra dia tsara ho an'ireo superstar rehetra tafiditra. Na izany aza, mbola misy ireo ao amin'ny lisitra mavitrika izay tena mila famadihana ombelahin-tongony, saingy mijanona ho endrika noho ny hamafin'ny WWE. Ilaina ny fiovan'ny toetran'ireto superstar 5 ireto ao anatin'ny roa ambin'ny folo volana, satria izy rehetra dia samy mihazakazaka hatrany.
Ireto ny Superstars 5 WWE izay TSY MAINTSY mihodina amin'ny 2017.
inona no hatao rehefa namadika anao ny namanao
# 5 Dolph Ziggler
Ny fihodinan'ny voditongotra ho an'i Ziggler dia mety hanandratra azy indray ho amin'ilay sehatry ny hetsika lehibe
Nandritra ny taona maro, Dolph Ziggler dia nanitsakitsaka rano toy ny endriny, satria izy dia be mpampiasa amin'ny WWE. Aza omena fotoana velively i Ziggler hananganana ny tenany ho superstar ambony, WWE dia nanome azy fotoana matetika, saingy tsy nitaona ny fientanam-po mihitsy ho an'ny 'Showoff' izy ireo.
Ny fihodinan'ny voditongotra dia nilaina nandritra ny fotoana elaela, satria mety hamelona indray an'i Ziggler. Toa hadinon'i WWE fa i Ziggler dia mahomby kokoa noho ny voditongotra noho izy endrika tarehy, miaraka amin'ny tsangambato nataony ho ilay «Showoff» mety tsara amin'ny toetra mampivadi-po.
Vakio ihany koa: Mpifanandrina 5 ho an'i Finn Balor rehefa miverina amin'ny 2017 izy
Taorinan'ny fatiantoka tato anatin'ny volana vitsivitsy dia tsy maintsy tonga ny fotoana ilain'i Ziggler hamihina ny lafiny maizimaizina, satria efa ela loatra izy no nibolisatra tarehy. Ziggler dia mbola mitolona amina lalao mahafinaritra, miaraka amin'ireo andiany fihaonany farany manohitra ny laharana Miz ho sasany amin'ireo tsara indrindra amin'ny WWE hatramin'ny nisarahana tamin'ny Brand Split tamin'ny Jolay.
zavatra mahafinaritra hatao mandritra ny mankaleo
Raha heverina ny zava-misy fa mbola afaka mitolona amin'ny lalao matanjaka izy, Ziggler dia mety ho superstar ambony manaraka amin'ny orinasa amin'ny voditongotra. Raha mbola heverin'ny WWE fa mety ho main-eventer i Ziggler, dia 2017 ny fotoana hampiodina ny voditongotra ‘Showoff’.
Zahao ny zava-nisongadina tamin'ny fahaverezan'ny PPV an'i Ziggler farany teo amin'ny Miz ao amin'ny TLC:
# 4 Andro Vaovao
Andro vaovao no nitazomana ny endrik'izy ireo ho lasa tarehy, nanjary matotra tato anatin'ny volana vitsivitsy
Ny fanovana ny Andro Vaovao ho iray amin'ireo ekipa malaza indrindra amin'ny vanim-potoana maoderina dia tantara mahafinaritra. Nolavina tamin'ny voalohany izy ireo ho tarehy ary avy eo nivadika voditongotra, izy telo mianadahy ireo dia nanamboatra tanteraka ny zava-bitany ka nahatonga ireo mpankafy te hampifaly azy ireo tamin'ny fiandohan'ny taona 2016.
Izy ireo dia tarehy hatrizay, ary mahagaga fa Kingston, Woods ary Big E dia afaka nanamboatra ny gimmick malemy ho lasa malaza amin'ny alàlan'ny fialamboly madio. Saingy, nanomboka nitombo tsimoramora toy ny tarehy ireo telo lahy, niaraka tamin'ny fihazonany mafy ny Titles Team Tag Raw nandritra ny 483 andro tsy nanampy ny anton'izy ireo.
Ny endrik'izy ireo, ny hatsikana ary ny toetran'izy ireo dia nanjary maloka, ary toa ny famerenana miverina ho voditongotra no safidy mety. Na dia mety te hitandrina ny Andro Vaovao aza i WWE noho ny endrika varotra varotra, ny fihodinan'ny voditongotra dia ilaina amin'ny 2017 noho ny fahamendrehan'ny endrik'izy ireo.
# 3 Sasha Banks
'The Boss' dia gimikika tonga lafatra ho an'ny voditongotra, araka ny fahitana azy amin'ny sanganasan'i Banks ao amin'ny NXT
Sasha Banks dia nanana afobe iray tao anatin'ny herintaona. Ny fanaovana tantara miaraka amin'i Charlotte amin'ny lalao malaza be dia be ho an'ny Tompondaka amin'ny vehivavy Raw, i Banks dia efa tompon-daka in-telo sahala amin'ny tarehy, na dia fotoana fohy nanjakan'izy ireo aza.
Na izany aza, ny mpankafy sasany (ao anatin'ity mpanoratra ity) dia tsy tia an'i Banks amin'ny endriny, ary ny fihodinan'ny voditongotra dia azo antoka fa ho an'ny 2017. Ny zava-drehetra momba ny Banky dia azo lazaina ho tsara kokoa toy ny ombelahin-tongony. Ny asany tsara indrindra hatreto amin'ny WWE dia ny ombelahin-tongony ao amin'ny NXT, miaraka amin'ny promos, ny toetrany ary ny mifanentana amin'ny endriny rehetra.
Ny gimmick-ny koa dia mety tsara ho an'ny persona bandy ratsy, satria ny 'Boss' miavona, ratsy toetra, tsara lavitra noho ny Boss manaja sy manetri-tena hitanay tara.
Nandritra ny taona lasa, na eo aza ny fahombiazany amin'ny endrika, dia nisy zavatra nahatsapa fa banga tamin'ny toetran'i Banks, ary izany no sisiny omen'ny fihodinan'ny voditongotra ho an'ny persona ‘Boss’. Raha te hahita ny asa tsara indrindra ataon'i Banks amin'ny lisitra lehibe i WWE, ny fihodinan'ny voditongotra dia tsy maintsy ho azy amin'ny 2017, satria azony atao ihany ny mandray ny toetran'ny ‘The Boss’ amin'ny fahaizany feno.
# 2 Dean Ambrose
John Cena no mpifaninana tonga lafatra amin'ny fihodinan'ny voditongotra Ambrose
Miaraka amin'i John Cena miasa fandaharam-potoana maivana kokoa ary ny sisa amin'ny tarehy amin'ny SD Live dia mpilalao antonony, i Dean Ambrose no endrika lehilahy ambony indrindra tamin'ny SD Live hatramin'ny nanombohan'ny fizarazarana marika.
Raha nifindra tamin'ny sehatry ny lohatenin'ny Intercontinental izy tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, Ambrose volana sisa no endrika tokana tamin'ny sehatra hetsika lehibe. Izany dia nanjary toetran'olona somary lava, satria i Ambrose dia namoy ny sisiny tena izy izay nitondra ny lazany tamin'ny tampon-trano voalohany.
Tao anatin'izay volana lasa izay, ny 'Lunatic Fringe' dia mbola tsy very saina mihitsy. Ny kinova amn-drano ny mety ho toetrany, ny toetran'i Ambrose dia niverina tamin'ny hatsikana matetika loatra. WWE dia toa lany ny fanatsarana an'i Ambrose amin'ny endriny, ary izany dia nahatonga azy nijanona am-bolana maro.
Ambrose dia endrika efa ho telo taona izao, fotoana tokony hamelana ny Lunatic hanaiky ny toetrany. Ny fihodinan'ny ombelahin-tongony ho an'i Ambrose dia afaka namela azy handeha ho any ivelany ho toy ny ombelahin-tongony tsy miovaova izay mikikitra amin'ny famonoana ireo mpanohitra azy, ary io dia ho fofonaina madio ho an'ny mpilalao Ambrose.
ohatrinona ny vidin'ny Webbie
Na dia mety misalasala aza i WWE hampiodina azy noho ny tsy fahampian'ny endrika ambony amin'ny SD Live, ny fihodinan'ny voditongotra dia ilaina ho an'i Ambrose amin'ny fotoana 2017 noho ny fijeriny ny tarehiny efa taraiky.
Fanapahana romana # 1
Ny Roman Reigns dia tena mila famadihana ombelahin-tongony
mahafinaritra ny miala voly fa tsy maintsy fantatrao ny fomba
Hatramin'ny 2015, ny Roman Reigns no superstar iray nila nila nanodina ny ombelahin-tongony, fa ny WWE (manokana Vince McMahon) dia mbola tsy nihetsika mihitsy. Reigns dia tsara amin'ny peratra, satria nanaporofo izany hatramin'ny 2016.
Ny lalao nifanaovany tamin'i AJ Styles, Seth Rollins ary Kevin Owens dia samy tsara tarehy avokoa ary voaporofo tsy nisy fisalasalana fa afaka mitolona i 'The Guy'. Na izany aza, mampihoron-koditra ny toetrany amin'ny endriny, ary mila familiana amin'ny lafiny maizina izy. Ny famandrihan'ny Reigns dia ampahany iray amin'ny olana.
Namandrika matanjaka noho ny mpiara-miasa aminy hatrany i Reigns, Superman-esque amin'ny fahazarany mandroaka roa ary tsy ho very madio mihitsy. Raha tokony hokarakaraina toy ny talenta ambony ambony rehetra izy, dia mivoaka toy ny ankihibe maratra, indrindra amin'ny tarehy, ny Reigns.
Raha ombelahin-tongony izy dia tsy dia ho tsikaritra loatra ity famandrihana ity, saingy toa mieritreritra i Vince McMahon fa 'hisarika' ny fitondrana toy ny tarehy, na eo aza ny fahaverezan'ny isa isaky ny lohateny Reigns. Ny toetran'ny olona tsy mahay an'i Reigns dia antony lehibe koa.
Maneho karisma kely dia kely ary tsy manome antony hampifaliana azy, dia manjaka amin'ny fiavonavonana mahery vaika i Reigns, na eo aza ny maha lehilahy tokony hampifaly antsika. Ny fihodinan'ny ombelahin-tongony dia hamelombelona ny toetrany hiverina amin'ilay mpanaparitaka boriky tokony ho izy, ary ny lalao mifanohitra amin'ny endrika voajanahary toa an'i Finn Balor sy Sami Zayn dia tsy mampino.
Fa kosa, manjaka tsy tapaka amin'ny toerany ny Reigns, tsy mety amin'ny toe-jaza. Ny fanehoan-kevitra dia ratsy hatrany ho an'ny 'Big Dog' hatramin'ny fiandohan'ny taona 2015, ary tsy misy na inona na inona hampifaly azy amin'izao fotoana izao.
Raha misy olona tokony hamadika voditongotra amin'ny 2017, Roman Reigns no tokony ho safidy voalohany amin'ny WWE, satria mila mamihina mafy ny lafiny maizina izy alohan'ny handavan'ny mpankafy azy tanteraka, toy ny tarehy na ny voditongotra.
Zahao ireo fisongadinana avy amin'ny lalao mahafinaritra an'ny Reigns miaraka amin'ny AJ Styles ao amin'ny Extreme Rules:
Misaotra namaky! Zahao ireo lahatsoratra hafa ao amin'ny mombamomba ahy, ary araho amin'ny Twitter aho: @AJStylesMark!
zavatra tokony hatao amin'ny namako akaiky indrindra
famantarana fa mandeha haingana loatra ny fifandraisana
rehefa raisin'ny olona ho anao ianao
ny fomba hahatongavana mangatsiaka am-po sy tsy misy fihetsem-po
inona no toetra ananan'ny maherifo